Sunday December 29, 2019 - 08:12:20 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dibad baxyo ballaaran ayaa dib uga bilaawday magaalooyinka waaweyn ee wadanka Hidinya kuwaas oo loogasoo horjeedo qaanuun cunsuriyadeed ka dhan ah dadka muslimiinta oo dowladda Hindiya dhaqan gelisay.
Kumanaan kun oo dibad baxayaal ah ayaa shalay isugusoo baxay fagaarayaasha waaweyn ee magaalada New Delhi, dadka dibad baxyada dhigaya waxay ka cabanayaan Qaanuunka dowladdu soo saartay ee Jinsiyadda siinaya dadka gaalada ah oo kaliya islamarkaana fuquuqaya muslimiinta.
Hoggaamiyaasha muslimiinta Hindiya waxay sheegeen in ciidamada booliska ay bilaabeen adeegsiga Kaamirooyin ay ku sawirayaan dibad baxayaasha kadibna ay kala wareegayaan hantidooda arrinkaas oo ah isku day lagu doonayo in lagu joojiyo dibad baxayaasha wadanka ka socda.
Saxiifadda Indian Express ayaa daabacday warbixin ay ku sheegayso in dowladda Hindiya ay falal cunsuriyadeed ku hayso muslimiinta sida iyadoo muwaadiniinta gaalada ah ee kasoo jeeda Pakisran,Bangaladheesh iyo Afghanistan u ogolaatay in ay qaataan dhalasho halka dadka muslimiinta ah loo diiday.
Wargeyskan ayaa sheegay in saraakiisha dowladda Hindiya ayay dadka dibad baxyada dhigayay ku oranayeen "Orda oo Pakistaan aada halkaas ayaad leedihiine", muslimiinta Hindiya waxay sheegeen in ay dowladda kaafirada ah kala kulmayaan cadaadiskii ugu xooganaa abid.